အသင်းကြီးတွေ နိုင်ကြတဲ့ လပြည့်ည ၊ ၄ ဂိုးသွင်းတဲ့ ဒါကာ ၊ ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား တည်နေရာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် ၄ ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ပွဲစဉ်တွေကို ယမန်နေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီပွဲတွေ မှာတော့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ ချဲလ်ဆီး အပါအဝင် အသင်းကြီးတွေ အနိုင်ရခဲ့ပြီး နောက်တဆင် အတွက် အခြေအနေ ကောင်းခဲ့ကြပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ မယ်လ်မို အသင်းကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့သလို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာလည်း အိမ်ကွင်းမှာ အတ္တလန်တာ ကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ ဘင်ဖီကာ ကို ၄ ဂိုးပြတ် အနိုင် ယူခဲ့ပြီး ၁၅ မိနစ် အတွင်းမှာ ပဲ ဂိုးအားလုံးကို သွင်းယူ သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယူဗင်တပ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ကတော့ ဇင်းနစ် နဲ့ ဒိုင်နမိုကိဗ် အသင်းတွေကို ၁-၀ ရလဒ်တွေ နဲ့ အနိုင် ကစားသွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
အုပ်စု ပွဲစဉ် ၃ အပြီးမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ၊ မန်ယူနိုက်တက် ၊ ဆဲလ်ဘတ် နဲ့ ယူဗင်တပ် တို့ဟာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုတွေကို ဦးဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန်အထိတော့ အိုင်ယက်စ် တိုက်စစ်မှူး ဆီဘတ်စီယန် ဟေလာ က ၆ ဂိုးနဲ့ ဂိုးအများဆုံး သွင်းထားပြီး မယ်လ်မို က အမီဟိုဒစ် ၊ ယန်းဘွိုင်းစ် က အီဘီရှား နဲ့ ဘင်ဖီကာ က အော့တာမန်ဒီ တို့ဟာ ၄ ဂိုးစီ ဖန်တီးကာ အများဆုံး ဖန်တီးသူတွေ အဖြစ် ရပ်တည် နေကြပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ်မှာတော့ လက်စတာ စီးတီး တိုက်စစ်မှူး ပက်စတွန် ဒါကာ ဟာ စပါးတပ် မော်စကို အသင်းကို ၄-၃ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ်မှာ လက်စတာ အတွက် တဦးတည်း ၄ ဂိုး သွင်းကာ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ လူကာကူ နဲ့ တီမို ဗာနာ တို့ဟာ မနေ့ညက ပွဲမှာ ဒဏ်ရာတွေ အသီးသီး ရရှိ ခဲ့ကြတာကြောင့် ရှေ့လာမယ့် ပွဲတွေ အတွက် စိတ်ပူ စရာ ဖြစ်လာခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် နည်းပြ ဘင်နီတက် ကတော့ သူ့ရဲ့ အသင်းသားတွေကို ဂိုးပေးလိုက်ရ အပြီးမှာ စုဖွဲ့မှု နဲ့ စိတ်ဓါတ် ပျက်ပြား သွားတတ်မှု ကို ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင် လေ့ကျင့် ပေးနေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ပါဝင် ကစားမယ့် ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစပိုင်းမှာ ကျင်းပဖို့ အလားအလာ များနေပြီး ယူအေအီး နိုင်ငံက ဂျပန် နိုင်ငံ အစား အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပဖို့လည်း ရာနှုန်း များနေပြီလို့ ကြာသိရ ပါတယ် ။
ဖီဖာ ဥက္ကဌ အင်ဖန်တီနို ကတော့ ၂ နှစ် တကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလား အစီအစဉ် ကို လက်မခံဘဲ ပြိုင်ပွဲ မဝင်ကာ သပိတ်မှောက်မယ့် လက်ရွေးစင် အသင်းတွေ အနေနဲ့ ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့် ပိတ်ခံရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုး ကို ကျခံ ရနိုင်တယ်လို့ ပြန်လည် သတိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ဟာ ထိပ်သီး အသင်းတွေသာ စုဝေးပြီး တန်းဆင်း တန်းတက် စနစ် မရှိမယ့် ဥရောပ စူပါလိဂ် အစီအစဉ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချ ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက် သာ စူပါလိဂ် ကို ပါဝင်ခဲ့ပါက အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ အထိ စဉ်းစား ထားခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း မတိုးရသေးတဲ့ ပြင်သစ် တောင်ပံ ကစားသမားလေး ဒမ်ဘီလီ ဟာ ပိုင်ရှင်သစ် လက်အောက်မှာ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူ အားဖြည့်ဖို့ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ နယူးကာဆယ် အသင်းထံ ကမ်းလှမ်းမှု ( သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ ) ပြုလုပ် ထားတယ် လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အဲဗာတန်ု တိုက်စစ်မှူး ဒိုမီနစ် ကယ်လ်ဗက် လီဝင်း ကို ခေါ်ယူဖို့ လည်း စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နည်းပြ အဖြစ် ကနေ ထုတ်ပယ် ခံခဲ့ရတဲ့ စတိဗ် ဘရုစ် ဟာ နစ်နာကြေး ပေါင် ၈ သန်း ကို တလုံးတခဲတည်း ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း ကွင်းလယ်လူ တိုမက် ဆူချက် ဟာ အဲဗာတန် နဲ့ ပွဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ မျက်နှာပေါ်က ဒဏ်ရာ ကို ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ပြုလုပ်ကုသ ရမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article ရိုနယ်ဒို ၊ ရက်ဖိုဒ့် ၊ ပါဆာလစ် တို့နဲ့ . . . မန်ယူနိုက်တက် ၃-၂ အတ္တလန်တာ ပွဲက စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် ၅ ချက်
Next Article ယာဂန်ကလော့ရဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးဟာ လီဗာပူးမှာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြင်းထန်တဲ့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဟာမန်း